तिथि मेरो पत्रु » छ नियम तपाईं आफ्नो साथी गरेको पत्रु व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्न
तपाईं घरपालुवा मालिक केटासित गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईं पाल्तु जनावर मालिकको पाल्तु जनावर केटासित गर्न जाँदै हुनुहुन्छ. यो आफ्नो सुस्त तेह्र वर्ष पुरानो सुनौलो कुत्ता वा आफ्नो शोर cockatiel हुन चाहे, आफ्नो मनमा प्रमुख आफ्नो पशु माध्यम हो.
तपाईं आफ्नो नयाँ पति वा पत्नी र आफ्नो नयाँ सम्बन्ध सीमालाई आदर जसरी, त्यसैले तपाईं आफ्नो घरपालुवा जनावरको आदर र आफ्नो साथी तिनीहरूलाई खडा कसरी गर्नुपर्छ.
तपाईं बस घरपालुवा मालिक संग एक प्रसंग मा मिल्यो छ भने, यी सरल नियम उल्लङ्घन को थकित हुन.
-आमा सह कोसिस नगर्नुहोस्. आफ्नो साथी उनको चिवावा छाया मा छाल कि मन गर्दैन भने, त्यसपछि न त तपाईंले. तपाईं एक विश्वस्तरीय पशु प्रशिक्षक छौं तापनि, आफ्नो पाल्तु जनावर तपाइँको छैन र तपाईं कि धेरै विस्तृत छ र बाहिर सोचा सम्म हुनेछैन (आषा) कुराकानी.
आफ्नो ठाउँ लिन प्रयास नगर्नुहोस्. आफ्नो पाल्तु जनावर संग एक व्यक्तिको सम्बन्ध एक सुन्दर कुरा हो. यो पनि धेरै नाजुक छ, विशेष र मेहनत. आफ्नो मिति उनको पिल्ला संग एक लामो पैदल लागि उनको सोमबार बिहान सुरक्षित भने, केही कफी संग उनको सामेल गर्न सोध्न, बरू यसलाई छोड छैन. तपाईं पहिलो पटक आफ्नो घरमा रात बिताउन भने मात्र आफ्नो oversized बिरालो ओछ्यानमा सुत्ने पत्ता लगाउनु, बिल्ली आसपास काम. निष्पक्ष उचित छ र यो तपाईं पहिले लामो समय सम्म बिस्तर मा थियो.
डन "टी तिनीहरूलाई खिसी. एक बिरालो महिला डेटिंग? आफ्नो प्रेमीले भेटिन्छ सबैलाई आफ्नो gerbil चित्रहरू देखाउँदैन? आफ्नो साथी हरेक बिहान उनको चिवावा लुगा लगाउँछु गर्छ, यो केटाको तापनि? यो न्याय आफ्नो ठाँउ छैन. संभावना, तपाईं तिनीहरूलाई अनौठो देखिने आफ्नो पाल्तु जनावर केही संस्कार छ, त्यसैले एक न्यूनतम गर्न गिज्याइको राख्न.
पालतू मुछिएको छ. पशु मानिसहरूको चरित्र धेरै इच्छुक छन्. तपाईं पाल्तु राम्रो गौरव मा प्राप्त गर्न सक्छन् भने, संभावना आफ्नो मालिक सूट को पालन गर्नेछ छन्. अनुकूल पाल्तु जनावर हो भनेर तपाईं सँगै गर्न सक्छन् कुराहरू खोज्नुहोस्.
समावेश छ? आफ्नो पालतू. धेरै एकल लागि, घरपालुवा जनावरको सन्तानहरू जस्तै छौं. तपाईं हेर्न चाहनुहुन्छ भने अनि आफ्नो भविष्य सँगै उज्ज्वल छ भने, आफ्नो घरपालुवा जनावरको पूरा गरौं र तिनीहरूले कसरी अन्तरक्रिया देख्न. तिनीहरूले पहिलो आपसमा रुचि छैन भने, त्यहाँ तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न प्रयास मा डाल. मात्र यो सजिलो हुनेछ, यो तपाईं आफ्नो सम्बन्ध मा दुई नजिक ल्याउन ठूलो तरिका हुनेछ.
एक महान् इशारा गर्छन्. त्यसैले, शायद तपाईं हरेक मिति मा साथ आफ्नो पाल्तु जनावर ट्याग गर्न चाहँदैनन्, तर प्रयास गनइन्छ छ. आफ्नो साथी ठेगाना गर्ने आवश्यकता सबै छ कि तपाईं एक दिन तिनीहरूलाई माया बस्छ भने, तपाईं आफ्नो पाल्तु जनावर प्रेम छौँ, पनि. आफ्नो जन्मदिन मनाउनु, वा तिनीहरूलाई व्यवहार किन्न. आफैलाई गरेर पार्क तिनीहरूलाई लिनुहोस्. साना कुराहरूको सधैं गणना, तर यो जाते आउँदा, कहिलेकाहीं ठूलो कुरा पनि राम्रो काम.